Arakan Eagle: ပုဂံကျောက်စာထဲက ရခိုင်ဝေါဟာရများ(၃)
Khaing Linn Maygawaddy
ဓမ္မရံကြီးဘုရားမြောက်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ အစေါဝ်လတ်ကျောက်စာမှာ " အမိ မရိယ်ခဘူသော က္လောက်စာ " လိုရှိပါတယ်။ ဒီနေ့စာနဲ့ ပြန်ရေးရရင် " အမိ မရေးခဲ့ဖူးသာ ကျောက်စာ " ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ရခိုင်မှာ အများစုက အမေကို (အမိ)လို့ ဒီနေ့ အချိန်ထိ ခေါ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ စာ(မရိယ်), စာ(ရိယ်)ဆိုတဲ့ စာ(မရီး) စာ(ရီး)ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးဟာ ဒီနေ့ ရခိုင်တွေ သုံးနေဆဲ ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ (မရိယ်ခသော)မှာ ပါတဲ့ (ခ)ကလည်း ရခိုင်တွေ နေ့တဓူဝ သုံးစွဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ( စာအုပ်ကို ထားခ)ဆိုတဲ့ ပံ...ုစံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ (စာအုပ်ကို ထားခဲ့)
ပုဂံသက်စိုးတောင် မရှက်စန်ဖာ ငရောက်သင်ခေါ်တဲ့ ကံကုန်စာချီသမီးကျောက်စာမှာ
" ရှုယ်တောင်တက်သကာ တိုင်သလင်လဆန် ၁၀ ၈ျက် ကြသပတိယ်နိယ် " ဆိုတဲ့ အရေးအသားမှာ (ကြာသပတိယ်)ဆိုတဲ့ ( ကြာသပတီး)ကိုရော (နိယ်)ဆိုတဲ့ (နိ)ကိုပါ ရခိုင်တွေ ဒီနေ့ အချိန်ထိ သုံးစွဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖွားစောကျောက်စာမှာ " က္လောက်ဆည် မ္လိယ် ၁၀၀ ပိယ်တ်မူ၏ " ဖြစ်ပါတယ်။ " က္လောက်" မှာ အောက်က (လ) " မ္လိယ် " မှာ အောက်က(လ)တွေဟာ ယပင့်ရော ရရစ်အတွက်ပါ ပုဂံကျောက်စာတွေမှာ သုံးကြပါတယ်။ ဆိုတော့ ( ကျောက်ဆည် မြေ ၁၀၀ ပေးတော်မူ၏)လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ( မ္လိယ်)ဆိုတဲ့ (မြီ)ကိုရော (ပိယ်)ဆိုတဲ့ (ပီး)ကိုရော ရခိုင်အမျိုးသားတွေ ယခုပစ္စက္ခကာလမှာ သုံးစွဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပုဂံကျောက်စာတစ်ခုမှာ " ပုရှာလှူသောလဲ ပါလိယ်ဧအ် " မှာ (ပါလိယ်)ဆိုတဲ့ (ပါလီ)ကို ရခိုင်တွေ သုံးစွဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂံခေတ်မှာ ပုရှာကတော့ ဘုရားလို့ ရေးပါတယ်။
ဖွားစောကျောက်စာတခုမှာ " တန်ဆောင်မှုန်လပ္လည် စနိယ်နိယ်" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မြန်မာတွေ စနေနေ့ ဖြစ်သွားပေမယ့် ရခိုင်တွေကတော့ (စနိယ်နိယ်) စနီနိလို့ သုံးစွဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကျောက်စာမှာဘဲ (ရိယ် မ္လိယ်ခပ်သိမ်းသော) စတဲ့ အရေးအသားတွေ ပါရှိသေးပါတယ်၊ (ရိယ် မ္လိယ်)ဆိုတဲ့ ( ရီမြီ)ကို အထက်မှာရော အခန်းဆက်မှာ ရေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ဖွားစော ကျောက်စာမှာ နောက်ထပ်တွေ့ရတာက " ငါလင် သ္ခိင်မင်ကြီ ငါသာမင်ကြီ ငါ မ္လိယ်မင်ကြီး " ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်က ပြောခဲ့သလို ဗျည်းအောက်က(လ)ဟာ ယပင့် ရရစ်ကို သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ (ငါ မ္လိယ်မင်ကြီး)မှာ( ငါ့မြေး)လို့ မြန်မာတွေ ဒီနေ့သုံးစွဲနေပေမယ့် ရခိုင်တွေကတော့ (ငါ မ္လိယ်)ကို (ငါ့မြီး)လို့ ဒီနေ့အချိန်ထိ ယှဉ်သန်သုံးစွဲနေကြောင်းပါ -- ။ ။ (ဆက်ရန်)
ငြိမ်းချမ်းစွာ သဘောထားကွဲလွဲ နိုင်ပါတယ် ---
Posted by Eagle info dash at 18:24
The 'Rohingya' Identity - British experience in Ar...
တော်လောက်ပါပြီကွယ်။ …NLD - USDP....
ပုဂံကျောက်စာထဲက ရခိုင်ဝေါဟာရများ (၂)
ရခိုင်ပြည်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး အထင်ကရ စာစုများ
Kyauk Phyu Special Economic Zone.
နိုင်ငံတကာကို ကြောက်လို့ ဒေသခံကို ထုတဲ့ အစီအရင်ခံစ...
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို …ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ
How are different between INGO and USDP government...
ဘစော်ဖြူ မင်းကြီး၏ နန်းဦးဖုရား။
ဘီလူးခေါင်းပေါ်လာသော ဘင်္ဂလီများ
2014 census , Day three.2April 2014
သန်းခေါင်စာရင်းသပိတ် ဖြစ်စဉ်အပေါ် ကျော်ဇောဦး၏ သုံး...